Xasan Sheekh salaanta ma la ag-mari doonaa GEDO & GARAWE? | KEYDMEDIA ENGLISH
Xasan Sheekh salaanta ma la ag-mari doonaa GEDO & GARAWE?
Rajada Ra’iisul Wasaare loogu magacaabi karo, Xamse Cabdi Barre oo hadda ah xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Golaha Shacabka, kuna heyb ah Axmed Madoobe ayaa sare u kacday saacadihii la soo dhaafay.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa la filayaa inuu ka hor 15 Juunyo 2022 ku dhawaaqo Ra’iisul Wasaaraha 21-aad ee dalka, xilli ay jiraan warar sheegaya in sanadkaan Ra’iisul Wasaaruhu ka imaan karo dhanka magaalada Kismaayo iyo maamulka Jubbaland ee Axmed Madoobe hoggaamiyo.
Sida caadiga ah sanadihii la soo dhaafay haddii Madaxweynuhu noqdo shaqsi Hawiye ka soo jeeda, waxaa Ra’iisul Wasaaraha laga dhigi jiray Majeerteen ama Mareexaan, hayeeshee, saacadihii la soo dhaafay waxaa si weyn u xoogeystay, xogo sheegaya in Xasan Sheekh, uu markii ugu horreysay xilka Ra’iisul Wasaaha sii doono beesha Ogaadeen.
Xildhibaan Xamze Cabdi Barre oo ku fadhiya kursiga HOP203 ee Golaha Shacabka, lagana soo doorto xarunta ku meel gaarka ee Jubaland, kana soo jeeda beesha Ogaadeen, ayaa la sheegayaa in laga yaabo in saacadaha soo aaddan loo magacaabo xilka, taasoo ka dhigi doonta siyaasigii u horreeyey ee ka yimaada beesha Ogaadeen oo jagadaas qabta.
Xamse Barre wuxuu hore u soo noqday Guddoomiyaha Guddigii doorashadii Jubaland waxaa lagu xasuustaa sidii uu doorashadaas ugu xagliyay Axmed Madoobe oo mar kale xilkaas ku laabtay bishii August-2019-kii, KON ayaana xasuusata in Madoobe qudhiisu uu kursiga HOP203 ku abaal mariyay Xamze, kaasoo ay hore ugu fadhisay Sahra Xaji Xuseen.
Xamse Barre, wuxuu ka tirsan yahay Xisbiga uu hoggaamiyo Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud ee loo yaqaan UPD, wuxuuna aad galangal ugu leeyahay ragga ku dhow Madaxweynaha, waana fursad kale, oo sare u sii qaadi karta rajadiisa ku addan in loo magacaabo wasiirka 1-aad ee Xukuumadda cusub.
Dhanka kale, Maxamed Keynaan, oo June 2015 ilaa February 2017, La-taliye sare u ahaa Madaxweyne Xasan Sheekh, kuna heyb ah Madaxweynaha Puntland Siciid Deni, ayaa ka mid ah shaqsiyaadka loogu hadal heynta badan yahay ee loo saadaalinayo xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, kadib Xildhibaan Xamse Barre.
Marka laga qiyaas qaato, xilalka uu ilaa hadda magacaabay Xasan Sheekh, sida Agaasimaha NISA oo loo dhiibay Mahad Salaad, iyo hoggaanka guud ee Madaxtooyada, Ra’iisul Wasaarahu, wuxuu ka imaan karaa kooxda ku xeeran Madaxweynaha, waana sabab kale oo kordhineysa rajada Xamse iyo Keynaan oo labaduba ka tirsan UPD.
Xasan Sheekh, waxaa la doortay 15-kii bishii hore, waxaana laga sugayaa inuu magaabo Ra’iisul Wasaaraha ka hor Arbacada, si uu u ilaaliyo qodob aan dastuurka ku qorneyn, hayeeshee noqday caado siyaasadeed oo muddo dher soo jiray, kaasoo ah in magacaabidda Ra’iisul Wasaaraha aysan dhaafin 30 cisho, kadib doorashada Madaxweynaha.